Olee otú Naghachi ehichapụ Kọntaktị na Android
Kọntaktị niile na m Android ekwentị dị nnọọ arahụ. M mmadụ na mberede tọgharịa ekwentị m ụlọ ọrụ ntọala. Olee otú naghachi a furu efu kọntaktị site na m Android ekwentị? Bụla ga-ekwu ga-n'ụzọ zuru ezu ji kpọrọ ihe. N'ihi! - James
Chọrọ iji naghachi ehichapụ kọntaktị site na Android ekwentị? M maara otú o na-ele ka mgbe ihichapụ mkpa kọntaktị ezighị. Dabara nke ọma, i nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị site na gam akporo igwe na kọntaktị mgbake software maka android - Wondershare Dr.Fone for Android (Android data mgbake) (desktọọpụ software). Ugbu a, m na-okosobode ọ bụla ngwa n'ihi na Android inwe ike ime mgbake. Naghachi ehichapụ kọntaktị site na Android ekwentị, na ị nwere kwesịrị:
1) Kwụsị eji gị Android ekwentị ozugbo, n'ihi na ọ bụ ihe ize ndụ ida kọntaktị niile ma ọ bụrụ na ị na-anọgide na-eji ya. Ehichapụ kọntaktị ka na-adị na gị Android ekwentị ebe ma-adịghị ahụ anya, na-eche na-ihichapu site ọhụrụ data. Na nke a, nọgidere na-eji ekwentị ga-n'ịwa ọhụrụ data, nke na N'ihi ga-eme ka ehichapụ kọntaktị ruo mgbe ebighị ebi.
2) Wụnye Wondershare Dr.Fone for Android na kọmputa gị na-eso nzọụkwụ n'okpuru naghachi furu efu kọntaktsị na gị android ngwaọrụ.
Ndi ana-akpo Iweghachite Software maka Android
Ụwa 1st software naghachi ehichapụ kọntaktị site na Android ngwaọrụ
Zọpụta ehichapụ kọntaktị site na Android dị ka printable VCF, CSV, ma ọ bụ HTML faịlụ.
Export kọntaktị dị ka .VCF faịlụ, mgbe e mesịrị ị nwere ike mbubata VCF gị Android ekwentị.
Ofụri Esịt akwado multiple Android igwe. Lelee ma gị Android na-akwado ma ọ bụ na >>
Ụfọdụ ndị mmadụ jụrụ ma a software bụ ike naghachi kọntaktị site na ihuenyo agbajikwa gam akporo igwe ma ọ bụ. Chọpụta, a Android kọntaktị mgbake ngwaọrụ bụ ike chọta kọntaktị niile, ma ehichapụ na undeleted ndị na gị Android ekwentị, na mbupụ ha kọmputa gị dị ka printable VCF, CSV, ma ọ bụ HTML faịlụ. Mgbe e mesịrị, ị nwere ike mbubata .VCF gị Android ekwentị.
Nkuzi maka Olee naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo na android ekwentị
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị android ngwaọrụ na kọmputa
Download usoro ihe omume na wụnye ya na kọmputa gị. Jikọọ gị android ekwentị gị na kọmputa. Na-agba ọsọ usoro ihe omume ị ga-enweta na windo nke software dị ka screenshot.
Nzọụkwụ 2 Kwado USB debugging na android ekwentị
Na-eji software naghachi ehichapụ kọntaktị site na android ekwentị, ị kwesịrị ị na mbụ nwee USB debugging na ekwentị gị. Echegbula! Ọ bụ nnọọ mfe aka USB debugging. Ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eme ya, dị nnọọ Soro nzọụkwụ n'okpuru dị ka version nke Android ekwentị gị na-agbaba.
1) Android 2.3 ma ọ bụ tupu: enweta "Mwube"> pịa "Ngwa"> pịa "Development"> ego "USB debugging"
2) Android 3.0 4.1: enweta "Mwube"> pịa "Mmepụta nhọrọ"> ego "USB debugging"
3) Android 4.2 ma ọ bụ ọhụrụ: enweta "Mwube"> pịa "Ihe ekwentị"> mgbata "Mee ọnụ ọgụgụ" ruo ọtụtụ ugboro ruo mgbe na-a dee "Ị bụ n'okpuru Mmepụta mode"> Back to "Mwube"> pịa "Mmepụta nhọrọ"> ego "USB debugging".
Cheta na: Mgbe ị na-enyere ndị ahụ USB debugging na ekwentị gị, ị nwere ike Ikwupu ekwentị gị ma ọ bụ na ekwentị gị ejikọrọ. Ọ na-adabere gị. Dị nnọọ na-uche, ekwentị gị ga-ejikọrọ na kọmputa gị mgbe ị nwee USB debugging.
Nzọụkwụ 3 Tụlee ekwentị gị na ike iṅomi maka ehichapụ kọntaktị
Pịa "Malite" ka anaylze gị Android ekwentị. The analysis ga-mezue na sekọnd ole na ole. Mgbe ya, ihe ka si Superuser rịọ ga-gbapụta na ihuenyo nke ngwaọrụ gị. Pịa "Kwe Ka" bọtịnụ ekwe ya. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-egosi ọtụtụ ugboro. Dị nnọọ pịa "Kwe Ka" ruo mgbe ọ dịghị egosi ọzọ. Wee pịa "Malite" na window nke usoro ihe omume na ọ na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị ugbu a.
Nzọụkwụ 4 Preview na-agbake ehichapụ kọntaktị site na Android ekwentị
Ọ bụghị nanị na-ehichapụ kọntaktị, kamakwa ndị nile na kọntaktị ugbu a na gị agbajikwa ngwaọrụ na-scanned na-egosipụta na Doppler N'ihi. Ịnwere ike ihuchalu ha otu otu na-ekpebi onye ị chọrọ. Akara ha na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: ehichapụ kọntaktị na ẹdude kọntaktị na-egosipụta na dị iche iche na agba na Doppler N'ihi. Ị nwere ike ikewapụ ha site na iji button n'elu: Naanị egosipụta ehichapụ ihe. Ọzọkwa, ị nwekwara ike naghachi na ndabere ozi, foto na video na gị agbajikwa Android ngwaọrụ ma ọ bụrụ gị mkpa.
Olee otú Jiri HTC mmekọrịta Manager ka ndabere na weghachite HTC
Top 5 Android Audio Manager: Jikwaa na-enwe Audio on Android Ngwaọrụ
> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si gam akporo Devices